In AGTI Year I, there are eight subjects.
In AGTI Year II, there are seven subjects.
In AGTI Year III, there are six subjects.
EP AGTI Course
The main subjects of Electrical Power Engineering are;
Basic Electricity, Basic Analog & Digital Electronics, Principles of Electrical Technology (for
Engineering Circuit Analysis, Electrical Machines I, II, Generation, Transmission and Distribution,
Electrical Wiring Design and Illumination, Electrical Machines (for Electronic Engineering)
Electrical Estimating, Electrical Machines III, IV, Transmission and Distribution, Industrial Motor
Control & Programmable Logic Controller, Electrical Safety & Protection.
In this EP department, has 11 teachers for teaching and lab; U Ye Aung is the head of the department of electrical power engineering. The main mission is the students to becomeaskillful electrician and fulfill attitude and knowledge.
1 Course Duration GTI တွင် တက်ရောက် ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသား/သူများအား ပညာသင်နှစ်အားဖြင့် (၃) နှစ် ပညာသင်ကြားစေပါသည်။ (၃) နှစ် ပညာသင်ကြားအောင်မြင်ပြီးသူများအား A.G.T.I ဒီပလိုမာ ပေးအပ်ထချီးမြှင့်ပါသည်။
3 Class Timing နေ့စဥ်ကျောင်းတက်ချိန် နံနက် (၈) နာရီခွဲ မှ (၁၁) နာရီခွဲ အထိ၊ နံနက် (၁၁) နာရီခွဲ မှ (၁၂) နာရီခွဲ အထိ ထမင်းစားချိန်၊ နေ့လည် (၁၂) နာရီခွဲ မှ ညနေ(၄) နာရီခွဲ အထိ ကျောင်းဆင်းချိန် ဟူ၍ သတ်မှတ်ပါသည်။ စာသင်ချိန်မှာ တနာရီ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ တနေ့ စာသင်ချိန် (၇) ချိန်ရှိပြီး တပါတ်လျှင် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ထိ စာသင်ကြားချိန်နှင့် လက်တွေ့သင်ချိန်ပေါင်း (၃၅)နာရီ ဟူ၍ သတ်မှတ်ပြီး သင်ကြားကြရပါသည်။
4 Assessment Methods သင်ကြားပြီးစီးခဲ့သော ဘာသာရပ်များအလိုက် Theory များကို First-semester Exam, Second Semester Exam ဟူ၍ ခွဲခြားစာမေးပွဲများ စစ်ဆေးပါသည်။
Practical များကို Job အလိုက် ပြုလုပ်စေကာ Job တခု ပြီးမြောက်ပါက စစ်ဆေး၍ အမှတ်များပေးကာ မှတ်တမ်းများထားရှိစေပါသည်။
6 Admission Requirements Details G.T.I ကျောင်းသို့ တက်ရောက်လိုလျှင် ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် မလိုပါ။ တက္ကသိုလ်၀င်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများသည် မည်သည့်နှစ်တွင် မဆို အောင်မြင် ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ အသက် ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ အင်္ဂလိပ် နှင့် သင်္ချာ (၂) ဘာသာပေါင်းရမှတ်ကို မူတည်၍ ၀င်ခွင့်ကို ခေါ်ပါသည်။ G.T.H.S မှ အောင်မြင်ပြီးသူများလည်း သတ်မှတ် အရည်အချင်းပြည့်မှီပါက လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသက် ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ သင်တန်းတခုတွင် ကျောင်းသား/သူဦးရေ (၄၀) သတ်မှတ်ပြီး ၀င်ခွင့်ကို ခေါ်ယူပါသည်။
7 Career Prospective After Graduate, etc A.G.T.I (EP) ဒီပလိုမာ ရရှိအောင်မြင်သူများသည် သက်ဆိုင်ရာ မိမိ တက်ကျွမ်းသော ပညာရပ်များဖြင့် ဆက်လက် အသက်မွေးနိုင်ကြပါသည်။ ၀န်ကြီးဌာနများ၊ စက်ရုံများတွင်၎င်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် Technician များအဖြစ်၎င်း၊ နိုင်ငံခြားသွားသင်္ဘောများတွင် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများအဖြစ်၎င်း သွားရောက် အလုပ်လုပ် ကိုင်နိုင်ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ အဆင့်မြင့်သော ပညာများကို ဆည်းပူး၍ လည်း နိုင်ငံအကျိုးအတွက်သော်၎င်း၊ မိမိ၏ မိသားစုများ အတွက် သော်၎င်း၊ ၀င်ငွေများစွာကို ရှာဖွေပေးနိုင်သော အင်ဂျင်နီယာကောင်းများအဖြစ်ကောင်းမွန်စွာရပ်တည်နိုင်ပါသည်။
Welcome to the Electrical Power Engineering Department at G.T.I ( Mandalay).